Home News Gobolka Hiiraan oo laga dareemayo dhaq dhaqaaqyo Ciidan
Wararka Ka imaanaya Gobalka Hiiraan ayaa Saakay sheegaya in Ciidamada Militariga Soomaaliya ay Howlgalo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ka tirsan Gobalkaasi.
Howlgalka ayaa ciidamada Xoogga waxaa ay ka wadaan inta u dhexeysa Magaalooyinka Beledweyn iyo Maxaas oo ka wada tirsan Gobalka Hiiraan.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in howlgalka looga goleeyahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ka tirsan Gobalka Hiiraan.
Howlgalkan ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa xili Shalay uu dagaal xoogan uu ka dhacay inta u dhexeysa Magaalada Beledweyn iyo degmada Maxaas ee Gobalka Hiiraan.
Dagaalkii shalay ayaa waxaa ay saraakiisha ciidanka Xoogga sheegeen in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaa ayna sheegeen in ku dhawaad 6 dagaalame, halka hubna ay ka soo furteen.
Previous articleKooxda Daacish oo falalka ugu badan Ee dilalka ah ka fulisa Magaalada Muqdisho
Next articleXildhibaanada BFS oo dacwo ka gudbiyay Gudoomiye Mahad Cabdalla Cawad iyo Go’aan Culus oo ay ka qaateen